Indlebe lehla "Otipaks", okuyinto libuyekeza zifakazela ukusebenza kwabo ekwelapheni abezindaba otitis, elabhorethri French wenza Biocodex. Isithako asebenzayo ekwakhiweni kuyinto phenazone - omunye analgesics yokuqala eyatholakala synthetically. Lokhu ebabayo kungekho nto enemibala emihle crystalline powder, ngaphezu isidambisa-zinhlungu, futhi antipiriticheskim (antipyretic) umphumela ngokulwa ngqo isikhungo thermoregulatory kule ngxenye. Njengoba isisekelo sayo (kwathiwa kwemiqondo ngo-1884) Uye waba engaphezu kwekhulu edlule, futhi phenazone kancane kancane balahlekelwa ukubaluleka kwayo. Okwamanje, ngenxa ukuvela ezinye, amaphilisi ezinhlungu ephumelela kakhudlwana, it is kuyaqabukela lisetshenziswe kwemithi imithi. Phenazone kodwa usengakathelwa lisusiwe ngesilwane esifuywayo reference amabhuku - njengoba kubonakala isibonelo "otipaks", ngezinye izikhathi ukusebenzisa kwayo kuphumelele ngempela.
Ngaphezu kwalokho phenazone, endlebeni lehla "Otipaks", ukusetshenziswa okuyinto kuvunyelwe ngisho izingane ezingaphansi konyaka siqukethe lidocaine (40 mg phenazone - 10 mg lidocaine hydrochloride), kanye izinto asizayo - amanzi, i-ethanol, glycerol kanye sodium thiosulfate, ukuhlinzeka anti-inflammatory futhi protivotoksicheskoe senzo. hydrochloride Lidocaine kuyindlela ephumelela izinzwa wendawo - umphumela wawo izikhathi eziningana namandla kunomFilisti novocaine. Ngaphezu kwalokho, phenazone sithuthukisa umphumela lidocaine - ngesivinini ukuqala nobude izinzwa iyakhula. Ngakho, lesi sidakamizwa "Otipaks" (izilinganiso siliqinisekise) akanalo ukusebenza eqeda ukuvuvukala kuphela, kodwa futhi kakhulu Kuyancipha ubuhlungu nge otitis.
Ukusetshenziswa "Otipaks" ekwakhiweni kuboniswe acute otitis abezindaba, abezindaba otitis ngawo zavela kwetintfo SARS, kanye nalokho okuthiwa barotravmaticheskom otitis (aeroootite), ingcindezi umehluko umphumela - isb, lapho umsebenzi caisson, diving noma ukwehla indiza. Ukuze ekwelapheni catarrhal otitis, kulandele lokushisa ongaphakeme noma ubuhlungu alinganiselayo endlebeni, ngaphezu izindlela "Otipaks", futhi wasebenzisa swabs encane ukotini (turundy) ofakwe boric utshwala noma calendulakuva tincture. Lapho ubovu otitis iconsi efanayo "Otipaks" izingane kanye nabantu abadala ezinqunyiwe njengenhlangano adjunct ukuba ngemithi elwa namagciwane. Phambi rhinitis ekwelapheni abezindaba otitis Kufanele kuhambisane ukusetshenziswa acinene vasoconstrictor lehla - eyodwa izidakamizwa "Otipaks" ngeke kwanele.
Umuthi asisho ukungena egazini ayinayo imiphumela letindzala, ke zingaba Kunconywa ukuba isetshenziswe yizingane ezincane. Ukuze ekwelapheni abezindaba otitis ezinsaneni kusho "Otipaks" ukugxilisa elilodwa noma amabili amathonsi kuze kube iminyaka emithathu - amathathu, eminyakeni engaphezu kuka emithathu - amathonsi ezine endlebeni, kathathu ngosuku. Umthamo omdala amathonsi ezine, kane ngosuku. Inkambo yokwelashwa kuncike isimo lesiguli Uthatha kwezinsuku ezintathu kuya kweziyishumi. Ngaphambi kokufaka isicelo amaconsi isitsha kufanele sekuqala ukufudumala entendeni yesandla sakho. Isixazululo kumele kusetshenziswe phakathi nezinyanga eziyisithupha.
Ukulungiselela "Otipaks" ayikwazi ezithathwayo uma ekhona imbobo eardrum (perforation). Ngokuvamile, ivikela maphakathi nendlebe ngu Ukungena zemizimba angaphandle kanye uketshezi ahlukahlukene. Uma sinqamukile ubuqotho eardrum, lehla "Otipaks" Ungafaka maphakathi nendlebe futhi kubangele sengozini yokuthola izifo, kuze ukulahlekelwa kukuzwa.
On isinyathelo ayo ngaphandle kokukhuluma onguchwepheshe akudingekile ukusebenzisa izidakamizwa "Otipaks": Izibuyekezo sincome kungenzeka komzimba nezinto. Ngokuyinhloko, zibangelwa ukuzwela esikhulu lidocaine, okuyinto ingekho kakhulu kuyaqabukela. Ngakho-ke, lapho ububomvu kanye ukulunywa e isicelo indlebe umsele zomuthi wayeka futhi ngokushesha afune usizo lwezokwelapha.
Idatha kwi ukuxhumana "Otipaks" izidakamizwa nezinye izidakamizwa kuze kube manje ayitholakali. Kusho "Otipaks" Izibuyekezo eyabonakala ukusebenza yayo, abazange bavinjelwe ukusetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa.
"Filtrum" (amaphilisi) kulokho usizo?
Lapho wathwebula movie "The Girls '? "Girls" - ifilimu ngo-1961. Indlela ukudubula ifilimu "Girls"?
Kuyini TS: ngezigaba kanye ukubhaliswa imithetho